ခြေချောင်းေ လးတွေက ပြော တဲ့ သင့် ရဲ့ စိတ်နေသဘောထား နဲ့ အစွမ်းသတ္တိ – Shwewiki.com
ခြေချောင်းေ လးတွေက ပြော တဲ့ သင့် ရဲ့ စိတ်နေသဘောထား နဲ့ အစွမ်းသတ္တိ
ခြေချောင်းလေးတွေ တစ်ချောင်းခြင်းစီက ကိုယ့်ရဲ့စိတ်နေသဘောထားနဲ့ ကိုယ်ဟာ ဘယ်လိုလူမျိုးဖြစ်တယ်ဆိုတာကို ဖော်ပြနေတယ်ဆိုတာ ယုံကြည်ပါရဲ့လား..?
ခြေချောင်း ပုံသဏ္ဍန်အနေအထားတွေပေါ်မှာ မူတည်ပြီး မတူညီတဲ့ ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးတွေ ရှိကြပါတယ်။ ခြေထောက်အဖျားပိုင်းရဲ့ ပုံသဏ္ဍန်ကို ရောမပုံစံ၊ လေးထောင့်ပုံစံ၊ ဂရိပုံစံနဲ့ ဖြန့်ကျက်ပုံစံ ဟူ၍ (၄)မျိုး ခွဲခြားထားပါတယ်။
၁။ ရောမပုံစံ ခြေထောက်
ခြေချောင်းအားလုံးထဲမှာ ခြေမက သိသိသာသာအကြီးဆုံးဖြစ်နေပြီး ကျန်တဲ့ခြေချောင်းလေးတွေက အချိုးညီစွာ ရှိနေမယ်ဆိုရင် “ရောမခြေထောက်” အဖြစ် သတ်မှတ်ပါတယ်။
အဲဒီလိုခြေထောက်မျိုးပိုင်ရှင်ဟာ ဖော်ရွေတတ်သူဖြစ်ပြီး၊ သြဇာညောင်းသူလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ လူမှုပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေး ကောင်းတဲ့သူဖြစ်ပြီး လူတွေအများကြီးရှေ့မှာ စကားပြောကောင်းတဲ့သူလည်းဖြစ်လို့ ဒီလိုခြေထောက်ပိုင်ရှင်များဟာ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေ ဖြစ်တတ်ပါတယ်။
၂။ လေးထောင့်ပုံစံ ခြေထောက်
ခြေချောင်းလေးတွေအားလုံးကို စုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင် ဖော်ပြပါပုံအတိုင်း လေးထောင့်ကျနေတာကို တွေ့ရပါလိမ့်မယ်။ သူတို့ဟာ အေးဆေးပြီးတော့ ဉာဏ်ပညာကြီးမားသူတွေ ဖြစ်တဲ့အပြင် အလိုလို ထိုးထွင်းသိစိတ်ရှိတတ်သူလည်းဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့ဟာ အရမ်းလေးနက်ခက်ခဲတဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်တွေ ချရတော့မယ့် အချိန်မှာ အဲဒီအစွမ်းသတ္တိတွေ အလိုလိုရလာတတ်သူပါ။ သူတို့တွေဟာ မိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းတွေ ဒုက္ခရောက်တဲ့အခါတိုင်း အနားမှာကူညီပေးဖို့ အသင့်ရှိနေတတ်သူတွေဖြစ်ပါတယ်။
၃။ ဂရိပုံစံ ခြေထောက်
ခြေညိုးက ခြေမထက်ပိုပြီး ရှည်ထွက်နေသူတွေကို ရည်ညွှန်းပါတယ်။ ဒီလိုခြေထောက်ပိုင်ရှင်ကတော့ ဘယ်အရာကို လုပ်လုပ် စိတ်အားထက်သန်စွာနဲ့ တစ်စိုက်မှတ်မှတ် လုပ်တတ်တဲ့သူမျိုး ဖြစ်ပါတယ်။ များသောအားဖြင့် သူတို့ကို အားကစားသမား၊ နိုင်ငံရေးသမား၊ အနုပညာသမား နဲ့ တီထွင်ဖန်တီးသူတွေအဖြစ် တွေ့မြင်နိုင်ပြီး သဘာဝအရ ဦးဆောင်နိုင်သူတွေလည်း ဖြစ်ပါတယ်။
၄။ ဖြန့်ကျက်ပုံစံ ခြေထောက်
ခြေချောင်းလေးတွေဟာ တစ်ချောင်းနဲ့တစ်ချောင်း နီးကပ်စွာရှိပြီး ခြေမ ကစလို့ ခြေသန်းထိ တစ်ဖြည်းဖြည်းသေးသွားတဲ့ ခြေချောင်းပိုင်ရှင်ကို ဖြန့်ကျက်ပုံစံအဖြစ် သတ်မှတ်ထားပါတယ်။ ဒီလို ခြေထောက်ပုံစံပိုင်ရှင်မှာ သူများနှင့်မတူပဲ ထူးခြားတဲ့စရိုက်လက္ခဏာတွေရှိပါတယ်။
သူတို့တွေဟာ စိတ်လိုက်မာန်ပါ ပြောတတ်ဆိုတတ်၊ ပြုလုပ်တတ်သလို အတော်လေး ခန့်မှန်း နားလည်ရခက်တဲ့ လူမျိုးတွေဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့ဟာ တစ်ဦးတည်း သီးသန့်အေးဆေးနေတတ်သူဖြစ်ပြီး ရှုပ်ရှုပ်ထွေးထွေးနေရတာကို လုံးဝမနှစ်သက်သူတွေလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ အဲလိုသီခြားနေရတာကိုလည်း အလွန်တန်ဖိုးထားကြသူမျိုးဖြစ်ပါတယ်။
ခြေချောင်းများစုစည်းမှု ပုံစံများက စိတ်နေစိတ်ထားကို ပြောပြနေသကဲ့သို့ ခြေချောင်းတစ်ချောင်းခြင်းစီရဲ့ ပုံသဏ္ဍန်ကပါ အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုမှုတွေ ခြားနားပါသေးတယ်။
အကယ်၍ ခြေမဟာ အခြားခြေချောင်းတွေထက် ပိုပြီးရှည်ထွက်နေမယ်ဆိုရင် လိမ္မာပါးနပ်သူဖြစ်သလို တီထွင်ဖန်တီးနိုင်တဲ့ စိတ်ကူးမျိုးရှိသူလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ ပြဿနာတစ်ခုကို ထူးခြားတဲ့ ဖြေရှင်းနည်းနဲ့ ဖြေရှင်းတတ်သူပါ။ သူများနဲ့မတူတဲ့ ရှုထောင့်အမြင်မျိုးက ကြည့်တတ်သူလည်းဖြစ်ပါတယ်။
အကယ်၍ ခြေမဟာ သိသိသာသာ သေးငယ်နေမယ်ဆိုရင်တော့ သူများတွေ လက်ဖျားခါရလောက်အောင် အလုပ်ပေါင်းစုံကို တစ်ပြိုင်နက် လုပ်ကိုင်နိုင်သူဖြစ်ပါတယ်။ မိမိရဲ့ စိတ်ကူးအကြံအစည်ကို သူတစ်ပါးလက်ခံလာအောင် ဖော်ဖော်ရွေရွေအပြုံးလေးတွေနဲ့ သိမ်းသွင်းစည်းရုံးနိုင်သူလည်း ဖြစ်ပါတယ်။
ညာဘက်ခြေထောက်ရဲ့ ခြေညိုးက သင့်ဘဝမှာ ဘာဖြစ်ချင်တာလဲဆိုတာကို ဖော်ပြနိုင်ပါတယ်။ ခြေထောက်ချကြည့်လိုက်တဲ့အခါ ညာဘက် ခြေညိုးက ကြမ်းပြင်နဲ့ ထိနေတယ်ဆိုရင် သင်ဖြစ်ချင်တဲ့အတိုင်း ဖြစ်နေသူဖြစ်ပါတယ်။
အကယ်၍ ကြမ်းပြင်နဲ့မထိတာ ဒါမှမဟုတ် ခြေညိုးနဲ့ ခြေခလယ်ကြားမှာ အတော်လေး ခြားနေမယ်ဆိုရင် သင်ဟာ စိတ်နောက်ကိုယ်ပါ မဖြစ်အောင် ထိန်းသိမ်းတတ်သူဖြစ်ပါတယ်။ ခြေညိုးဟာ ပိုရှည်လေ ခေါင်းဆောင်နိုင်မှု စွမ်းရည်မြင့်မားလေ ဖြစ်ပါတယ်။
ခြေခလယ်ဟာ သိသိသာသာ ရှည်လျားနေမယ်ဆိုရင် စိတ်ခွန်အားကောင်သူဖြစ်ပြီး အထူးသဖြင့် လုပ်ငန်းခွင်မှာ လုပ်ရည်ကိုင်ရည်ရှိသူ ဖြစ်ပါတယ်။ ခြေခလယ်ပိုရှည်လေ အသက်မွေးမှုလမ်းကြောင်းမှာ အောက်မြင်မှု ပိုရလေ ဖြစ်ပါတယ်။
ခြေသန်းကြွယ်ကတော့ ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးကို ဖော်ပြနေပြီး၊ ဖြောင့်ဖြောင့်မတ်မတ် ရှည်ထွက်နေရင်တော့ မိသားစုဟာ သင့်ဘဝအတွက် အရေးအကြီးဆုံး နံပါတ်တစ်လို့ သတ်မှတ်ထားသူဖြစ်ပါတယ်။ ဘဝမှာ ချစ်ခင်ရသူတွေနဲ့ အဆင်မပြေတတ်တဲ့သူတွေရဲ့ ခြေသန်းကြွယ်က ကောက်ကွေးနေတတ်ပါတယ်။
ခြေသန်းသေးသေးလေး ပိုင်ဆိုသူတွေကတော့ ငြီးငွေလွယ်သူတွေဖြစ်ပြီး ရယ်ရွှင်မြူးစရာ စိတ်အပြောင်းအလဲ ဖြစ်စရာလေးတွေနောက်ကို မနားတမ်းလိုက်တတ်သူဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒါကြောင့် လူမှုပတ်ဝန်းကျင်မှာ ပျော်စရာလေးတွေ ရတတ်ပါတယ်။
အကယ်၍ ခြေသန်းလေးကို ခြေသန်းကြွယ်နဲ့ မထိအောင်၊ ကွာအောင် ဖြန့်ကားနိုင်သူဆိုရင်တော့ စိတ်လိုက်မာန်ပါပြုတတ်တယ်၊ စွန့်စားတတ်တယ်၊ စိတ်ကစားတတ်တဲ့သူ ဖြစ်ပါတယ်။
အကယ်၍ ကွာအောင် မဖြန့်ကားနိုင်သူဆိုရင်တော့ သမားရိုးကျသမား၊ ကြိုတင်မှန်းဆတတ်သူနဲ့ သစ္စာရှိသူအဖြစ် မှတ်ယူနိုင်ပါတယ်။
ဒါတွေကတော့ ခြေချောင်းလေးတွေက ပြောပြတဲ့ သင့်ရဲ့ စိတ်နေသဘာဝနဲ့ ပင်ကိုယ်စွမ်းရည်သတ္တိများပဲဖြစ်ပါတယ်။ သင်ရော ဘယ်လိုလူမျိုးလည်း နံပါတ် ၁ လား.? ၂ လား.? ၃ လား.? ၄ လား.? ဆိုတာ ပြောခဲ့ပါဦး။
ခွခြေောငျးလေးတှေ တဈခြောငျးခွငျးစီက ကိုယျ့ရဲ့စိတျနသေဘောထားနဲ့ ကိုယျဟာ ဘယျလိုလူမြိုးဖွဈတယျဆိုတာကို ဖျောပွနတေယျဆိုတာ ယုံကွညျပါရဲ့လား..?
ခွခြေောငျး ပုံသဏ်ဍနျအနအေထားတှပေျေါမှာ မူတညျပွီး မတူညီတဲ့ ကိုယျရညျကိုယျသှေးတှေ ရှိကွပါတယျ။ ခွထေောကျအဖြားပိုငျးရဲ့ ပုံသဏ်ဍနျကို ရောမပုံစံ၊ လေးထောငျ့ပုံစံ၊ ဂရိပုံစံနဲ့ ဖွနျ့ကကျြပုံစံ ဟူ၍ (၄)မြိုး ခှဲခွားထားပါတယျ။
၁။ ရောမပုံစံ ခွထေောကျ
ခွခြေောငျးအားလုံးထဲမှာ ခွမေက သိသိသာသာအကွီးဆုံးဖွဈနပွေီး ကနျြတဲ့ခွခြေောငျးလေးတှကေ အခြိုးညီစှာ ရှိနမေယျဆိုရငျ “ရောမခွထေောကျ” အဖွဈ သတျမှတျပါတယျ။
အဲဒီလိုခွထေောကျမြိုးပိုငျရှငျဟာ ဖျောရှတေတျသူဖွဈပွီး၊ သွဇာညောငျးသူလညျး ဖွဈပါတယျ။ လူမှုပေါငျးသငျးဆကျဆံရေး ကောငျးတဲ့သူဖွဈပွီး လူတှအေမြားကွီးရှမှေ့ာ စကားပွောကောငျးတဲ့သူလညျးဖွဈလို့ ဒီလိုခွထေောကျပိုငျရှငျမြားဟာ စီးပှားရေးလုပျငနျးရှငျတှေ ဖွဈတတျပါတယျ။
၂။ လေးထောငျ့ပုံစံ ခွထေောကျ
ခွခြေောငျးလေးတှအေားလုံးကို စုကွညျ့လိုကျမယျဆိုရငျ ဖျောပွပါပုံအတိုငျး လေးထောငျ့ကနြတောကို တှရေ့ပါလိမျ့မယျ။ သူတို့ဟာ အေးဆေးပွီးတော့ ဉာဏျပညာကွီးမားသူတှေ ဖွဈတဲ့အပွငျ အလိုလို ထိုးထှငျးသိစိတျရှိတတျသူလညျးဖွဈပါတယျ။ သူတို့ဟာ အရမျးလေးနကျခကျခဲတဲ့ ဆုံးဖွတျခကျြတှေ ခရြတော့မယျ့ အခြိနျမှာ အဲဒီအစှမျးသတ်တိတှေ အလိုလိုရလာတတျသူပါ။ သူတို့တှဟော မိတျဆှအေပေါငျးအသငျးတှေ ဒုက်ခရောကျတဲ့အခါတိုငျး အနားမှာကူညီပေးဖို့ အသငျ့ရှိနတေတျသူတှဖွေဈပါတယျ။
၃။ ဂရိပုံစံ ခွထေောကျ
ခွညေိုးက ခွမေထကျပိုပွီး ရှညျထှကျနသေူတှကေို ရညျညှနျးပါတယျ။ ဒီလိုခွထေောကျပိုငျရှငျကတော့ ဘယျအရာကို လုပျလုပျ စိတျအားထကျသနျစှာနဲ့ တဈစိုကျမှတျမှတျ လုပျတတျတဲ့သူမြိုး ဖွဈပါတယျ။ မြားသောအားဖွငျ့ သူတို့ကို အားကစားသမား၊ နိုငျငံရေးသမား၊ အနုပညာသမား နဲ့ တီထှငျဖနျတီးသူတှအေဖွဈ တှမွေ့ငျနိုငျပွီး သဘာဝအရ ဦးဆောငျနိုငျသူတှလေညျး ဖွဈပါတယျ။
၄။ ဖွနျ့ကကျြပုံစံ ခွထေောကျ
ခွခြေောငျးလေးတှဟော တဈခြောငျးနဲ့တဈခြောငျး နီးကပျစှာရှိပွီး ခွမေ ကစလို့ ခွသေနျးထိ တဈဖွညျးဖွညျးသေးသှားတဲ့ ခွခြေောငျးပိုငျရှငျကို ဖွနျ့ကကျြပုံစံအဖွဈ သတျမှတျထားပါတယျ။ ဒီလို ခွထေောကျပုံစံပိုငျရှငျမှာ သူမြားနှငျ့မတူပဲ ထူးခွားတဲ့စရိုကျလက်ခဏာတှရှေိပါတယျ။
သူတို့တှဟော စိတျလိုကျမာနျပါ ပွောတတျဆိုတတျ၊ ပွုလုပျတတျသလို အတျောလေး ခနျ့မှနျး နားလညျရခကျတဲ့ လူမြိုးတှဖွေဈပါတယျ။ သူတို့ဟာ တဈဦးတညျး သီးသနျ့အေးဆေးနတေတျသူဖွဈပွီး ရှုပျရှုပျထှေးထှေးနရေတာကို လုံးဝမနှဈသကျသူတှလေညျး ဖွဈပါတယျ။ အဲလိုသီခွားနရေတာကိုလညျး အလှနျတနျဖိုးထားကွသူမြိုးဖွဈပါတယျ။
ခွခြေောငျးမြားစုစညျးမှု ပုံစံမြားက စိတျနစေိတျထားကို ပွောပွနသေကဲ့သို့ ခွခြေောငျးတဈခြောငျးခွငျးစီရဲ့ ပုံသဏ်ဍနျကပါ အဓိပ်ပါယျဖှငျ့ဆိုမှုတှေ ခွားနားပါသေးတယျ။
အကယျ၍ ခွမေဟာ အခွားခွခြေောငျးတှထေကျ ပိုပွီးရှညျထှကျနမေယျဆိုရငျ လိမ်မာပါးနပျသူဖွဈသလို တီထှငျဖနျတီးနိုငျတဲ့ စိတျကူးမြိုးရှိသူလညျး ဖွဈပါတယျ။ ပွဿနာတဈခုကို ထူးခွားတဲ့ ဖွရှေငျးနညျးနဲ့ ဖွရှေငျးတတျသူပါ။ သူမြားနဲ့မတူတဲ့ ရှုထောငျ့အမွငျမြိုးက ကွညျ့တတျသူလညျးဖွဈပါတယျ။
အကယျ၍ ခွမေဟာ သိသိသာသာ သေးငယျနမေယျဆိုရငျတော့ သူမြားတှေ လကျဖြားခါရလောကျအောငျ အလုပျပေါငျးစုံကို တဈပွိုငျနကျ လုပျကိုငျနိုငျသူဖွဈပါတယျ။ မိမိရဲ့ စိတျကူးအကွံအစညျကို သူတဈပါးလကျခံလာအောငျ ဖျောဖျောရှရှေအေပွုံးလေးတှနေဲ့ သိမျးသှငျးစညျးရုံးနိုငျသူလညျး ဖွဈပါတယျ။
ညာဘကျခွထေောကျရဲ့ ခွညေိုးက သငျ့ဘဝမှာ ဘာဖွဈခငျြတာလဲဆိုတာကို ဖျောပွနိုငျပါတယျ။ ခွထေောကျခကြွညျ့လိုကျတဲ့အခါ ညာဘကျ ခွညေိုးက ကွမျးပွငျနဲ့ ထိနတေယျဆိုရငျ သငျဖွဈခငျြတဲ့အတိုငျး ဖွဈနသေူဖွဈပါတယျ။
အကယျ၍ ကွမျးပွငျနဲ့မထိတာ ဒါမှမဟုတျ ခွညေိုးနဲ့ ခွခေလယျကွားမှာ အတျောလေး ခွားနမေယျဆိုရငျ သငျဟာ စိတျနောကျကိုယျပါ မဖွဈအောငျ ထိနျးသိမျးတတျသူဖွဈပါတယျ။ ခွညေိုးဟာ ပိုရှညျလေ ခေါငျးဆောငျနိုငျမှု စှမျးရညျမွငျ့မားလေ ဖွဈပါတယျ။
ခွခေလယျဟာ သိသိသာသာ ရှညျလြားနမေယျဆိုရငျ စိတျခှနျအားကောငျသူဖွဈပွီး အထူးသဖွငျ့ လုပျငနျးခှငျမှာ လုပျရညျကိုငျရညျရှိသူ ဖွဈပါတယျ။ ခွခေလယျပိုရှညျလေ အသကျမှေးမှုလမျးကွောငျးမှာ အောကျမွငျမှု ပိုရလေ ဖွဈပါတယျ။
ခွသေနျးကွှယျကတော့ ပေါငျးသငျးဆကျဆံရေးကို ဖျောပွနပွေီး၊ ဖွောငျ့ဖွောငျ့မတျမတျ ရှညျထှကျနရေငျတော့ မိသားစုဟာ သငျ့ဘဝအတှကျ အရေးအကွီးဆုံး နံပါတျတဈလို့ သတျမှတျထားသူဖွဈပါတယျ။ ဘဝမှာ ခဈြခငျရသူတှနေဲ့ အဆငျမပွတေတျတဲ့သူတှရေဲ့ ခွသေနျးကွှယျက ကောကျကှေးနတေတျပါတယျ။
ခွသေနျးသေးသေးလေး ပိုငျဆိုသူတှကေတော့ ငွီးငှလှေယျသူတှဖွေဈပွီး ရယျရှငျမွူးစရာ စိတျအပွောငျးအလဲ ဖွဈစရာလေးတှနေောကျကို မနားတမျးလိုကျတတျသူဖွဈပါတယျ။ အဲဒါကွောငျ့ လူမှုပတျဝနျးကငျြမှာ ပြျောစရာလေးတှေ ရတတျပါတယျ။
အကယျ၍ ခွသေနျးလေးကို ခွသေနျးကွှယျနဲ့ မထိအောငျ၊ ကှာအောငျ ဖွနျ့ကားနိုငျသူဆိုရငျတော့ စိတျလိုကျမာနျပါပွုတတျတယျ၊ စှနျ့စားတတျတယျ၊ စိတျကစားတတျတဲ့သူ ဖွဈပါတယျ။
အကယျ၍ ကှာအောငျ မဖွနျ့ကားနိုငျသူဆိုရငျတော့ သမားရိုးကသြမား၊ ကွိုတငျမှနျးဆတတျသူနဲ့ သစ်စာရှိသူအဖွဈ မှတျယူနိုငျပါတယျ။
ဒါတှကေတော့ ခွခြေောငျးလေးတှကေ ပွောပွတဲ့ သငျ့ရဲ့ စိတျနသေဘာဝနဲ့ ပငျကိုယျစှမျးရညျသတ်တိမြားပဲဖွဈပါတယျ။ သငျရော ဘယျလိုလူမြိုးလညျး နံပါတျ ၁ လား.? ၂ လား.? ၃ လား.? ၄ လား.? ဆိုတာ ပွောခဲ့ပါဦး။
မြန်မာလူငယ် MOU လုပ် သားတစ် ဦး ထိုင်းထီ ပထမဆု ဘတ်(6)သန်း ဆု ကံထူးသွား ရာ AAC အဖွဲ့မှ ငွေထုတ်ယူပေးခဲ့…
ကွမ်းဂျိုး ကို ငွေကြေးကုန်ကျမ များ ပဲ အပြောင် ဖယ်ရှားနည်း